Horudhac: Manchester City vs Burnley… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka maanta ka dhacaya garoonka Etihad) – Gool FM
(Manchester) 28 Nof 2020. Manchester City ayaa doonaya inay sare uga soo kacdo kaalimaha hoose ee ay kaga jirto horyaalka Premier League, marka ay garoonkeeda Etihad ku soo dhoweynayso Burnley maqribnimada maanta.
Kooxda Pep Guardiola ayaa u soo baxday wareegga 16ka Champions League bartamihii isbuucii hore, laakiin waxay isku arkeen inay ku dhibtoonayaan qeybta hoose ee miiska kala sarreynta Premier League iyagoo soo dhaweynaya koox Burnley ah oo heshay guushoodii ugu horreysay xilli ciyaareedka kulankoodii ugu dambeeyay.
Macallinka Manchester City ee Pep Guardiola ayaa haysta shax taam ah, iyadoo Nathan Ake uu yahay mid la heli karo kulankan kaddib labo kulan oo uu maqnaa.
Sergio Aguero ayaa raadinaya inuu ku soo bilowdo kulankiisii ugu horreeyay muddo shan toddobaad ah.
Goolhayaha kooxda Burnley ee Bailey Peacock-Farrell ayaa heegan ugu jira inuu safto kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League haddii Nick Pope uu ku maqnaado dhaawac madax ah oo ka soo gaaray kulankii Crystal Palace.
Xiddigaha khadka dhexe ee Dale Stephens iyo Robbie Brady ayay u badan tahay in aysan diyaar u ahayn in ay soo laabtaan kaddib dhaawacyo muruqa ah.
>- Manchester City ayaa badisay lix kulan oo isku xigta oo ay garoonkeeda kula ciyaareyso Burnley tartammada oo dhan, saddexdii kulan ee ugu danbeysayna mid walba wuxuu ku dhammaaday 5-0.
>- Guushii kali ahayd ee Burnley ay ka gaartay Man City 25-kii kulan ee la soo dhaafay waxay ahayd 1-0 ay ku garaacday horyaalka Premier League garoonkeeda Turf Moor bishii Maarso 2015, waxaana ay kulammada kale kala kulmeen 6 barbaro iyo 18 guuldaro.
>- Waxay aadeen 14 kulan oo marti ah tartammada oo dhan, iyadoon wax guul ah ka gaarin Manchester City tan iyo markii daafaca Clarets Colin Waldron uu dhaliyay goolka kaliya ee Maine Road ee Charity Shield bishii Agoosto 1973-kii.
>- Kooxda Clarets ayaa laga dhaliyay 34 gool oo Premier League ah kulankaan, waana in ka badan kooxaha kale.
>- Man City dhibcaha ay haysato ayaa ah 12-dhibcood waa markii ugu hooseysay kaddib siddeed kulan oo ay ciyaareen tan iyo 2008-09, halka ay dhaliyeen wax ka yar 11-gool marxaladdaan xilli ciyaareedka markii ugu horreysay muddo 14 sano ah.
>- Manchester City ayaa guuldarro la kulmi karta kulammo isku xiga ee Premier League markii saddexaad oo kaliya inta uu leylinayo Pep Guardiola, kaddib December 2016 iyo December 2018.
>- Guul la’aan ayey ku ahaan karaan saddex kulan oo isku xiga oo horyaalka ah markii ugu horreysay tan iyo afar jeer oo xiriir ah laga bilaabo Maarso ilaa April 2017.
>- Waxay ku guuldarreysteen inay dhaliyaan wax ka badan hal jeer lixdii kulan ee ugu dambeysay horyaalka, waa rikoorkii ugu dheeraa ee noocan oo kale ah ee City tan iyo markii ay ciyaartay 14 kulan oo xiriir ah intii u dhaxeysay Maarso iyo September ee sanadkii 2006.
>- Sergio Aguero ayaa dhaliyay sagaal gool sagaalkiisii kulan ee ugu dambeeyay ee uu ka horyimid Burnley tartammada oo dhan, laakiin ciyaaryahanka reer Argentine ee haatan siddeed kulan oo goolal la’aan ah horyaalka ayaa ah kan labaad ee ugu dheer ee xirfaddiisa ciyaareed ee Yurub.
>- Gabriel Jesus ayaa gool dhaliyey mid kasta oo ka mid ah lixdiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ku ciyaaray garoonka kooxdisia ee Etihad.
>- Burnley ayaa diiwaangelisay guusheedii ugu horreysay ee Premier League xilli ciyaareedka Isniinta, laakiin waxay kaliya kasbadeen labo dhibcood afar kulan oo ay marti ahaayeen.
>- Kooxda loo yaqaan ‘Clarets’ ayaa guuldarro la kulmi karta lix ka mid ah sagaal kulan oo furitaanka horyaalka markii ugu horreysay tan iyo fasal ciyaareedkii 1981-82, markaasoo ay ku jireen heerka saddexaad.
>- Kulamadooda Premier League ee xilli ciyaareedkan waxa ay dhaliyeen kaliya 16 gool, waana in ka yar kooxaha kale.
>- Kooxda Sean Dyche ayaa barbareyn karta rikoorka kooxda ee saddex jeer oo isku xigta oo ay shabaqooda nadiif ka dhigteen iyagoo marti ah, kaasoo ay hore u gaareen markii ugu dambeysay sanadkii 1955-kii.
>- Clarets iyo Sheffield United ayaa ah gooldhaliyeyaasha ugu hooseeya qeybta kuwaasoo leh min afar gool.